အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော်ကြီး ၇၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရာသို့ ပေါက်တောမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ သွားရောက်လှူဒါန်း လုပ်အားဒါနပါဝင်ကူညီ – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော်ကြီး ၇၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရာသို့ ပေါက်တောမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ သွားရောက်လှူဒါန်း လုပ်အားဒါနပါဝင်ကူညီ
၃၀ . ၈ . ၂၀၁၈ ​ရက်နေ့​ ပေါက်​​တောမြို့နယ်​ ပြည်​ခိုင်​ဖြိုးပါတီမှ ပြည်​နယ်​​ကော်​မတီ ဦးထွန်း​အောင်​ခိုင်​၊ မြို့နယ်​ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်​​မောင်​သိန်း၊ အမျိုးသမီး​ရေးရာတာဝန်​ခံနှင့်​အဖွဲ့ဝင်​များ၊ လူငယ်​​ရေးရာတာဝန်​ခံနှင့်​အဖွဲ့ဝင်​များသည်​​ လောကထိပ်​ပန်​ဘုရား၌ အဓိဋ္ဌာန်​ဆရာ​တော်​ကြီး ၇၁ နှစ်​ပြည့်​မွေး​နေ့ကျင်းပရာသုိ့ သွား​ရောက်​လှူဒါန်းပြီး လုပ်​အားဒါနပါဝင်​ကူညီခဲ့ကြသည်​၊
← မကွေးမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ မီကျောင်းရဲတိုက်နယ်ရှိ ပါတီခေါင်းဆောင်များ နှင့် တွေ့ဆုံ
သန်လျင်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ နှင့် အလင်းရောင်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ မျက်စိဝေဒနာရှင်တို့အား အခမဲ့ မျက်စိစမ်းသပ်ကုသပေး →
မိုးညှင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ မြန်မာ့ရိုးရာ အခြေခံသိုင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
May 21, 2019 USDP 2016 Comments Off on မိုးညှင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ မြန်မာ့ရိုးရာ အခြေခံသိုင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်